Talo-siinta Shaqo ee Dubai ee Naftaada Is-Imaatinka Imaatinka ILA
Published by Shirkadda Dubai City at November 11, 2017
Shaqada Talo-siinta Shaqo ee Dubai iyo raadinta naftaada suuqa
Dubai mustaqbalkiisa talo shaqo raadinta iyo siyaabaha aad naftaada ugu suuq gayn karto. In kasta oo ay tani run noqon karto Dubai City laakiin suuq geyn shaqsiyadeed aad ubaahantahay waxay leeyihiin hagaha shaqada ee Dubai. Waxaa jira qaabab aad u wanaagsan oo aad ku suuq gayn karto faahfaahintaada xirfadeed si aad shaqo cusub uga hesho Dubai. Waayo ujeedada shaqo raadinta Dubai. Ilaa waqtigan xaadirka ah, weli waxaa jira habab badan oo wanaagsan oo loogu suuq geyn karo resume-gaaga UAE. Ujeeddadan oo Bariga Dhexe ah, Suuqa xirfadeed wuxuu noqon karaa meel tartan ah. Oo aan dib u dhacin, booskaaga riyadii waa la qaadi karaa waqti kasta qof kale. Ilaa iyo inta ay maamulayaasha isku qoraan maareynta kormeerayaasha cusub. Waxaad weli fursad u heli doontaa shaqo cusub ka raadso UAE.
Xaaladahaas oo kale, waa inaad bilowdaa shaqada magacaaga gaarka ah. Mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan Waa inaad wax ka ogaato doorkaaga cusub ee ay sii ballaarinayso sumaddaada gaarka ah ujeeddada shaqooyinka suuq-geynta ee Dubai Magaalada iyo Abu Dhabi. In la barto cidda aad tahay waa in yool la ahaado. Gaar ahaan haddii aad jeceshahay inaad garaacdo si aad shaqo uga hesho degaanka magaalada Dubai. Waxaad u baahan tahay inaad si caqli-gal ah u maamulto CV-gaaga.
Shaqooyinka Dubai - sida dhabta ah ee aad u wanaagsan suuqa aad shaqo
Si aad si kala duwan u dhigto sida sawirada haysashada kartida xirfadeed ee saxda ah. Dhanka shaqada, khibradda markasta maahan ku filan si aad u hesho xirfad cusub. Iyada oo tan maskaxda lagu hayo, waxaad u baahan tahay inaad ogaatid sida loola iibsado naftaada. Sidaa awgeed iyo si ku filan, sababtaas awgeed, waxaad u baahan tahay inaad baratid sida dhabta ah ee aad u fiican suuqa shaqada. Guud ahaan, codsashada shaqo cusub waa habka ugu wanaagsan ee lagu maareyn karo xirfaddaada. Marka la eego qodobbadaas, suuq-geynta shakhsiyadeed ee wanaagsani waa iibinta naftaada
Si loo tilmaamo sameynta warbixinta loo-shaqeeye mustaqbalka waa sida helitaanka hogaanka iibka. Rajada ah in aad Ujeeddada ayaa kugu meelayneysa inay kuu dhigato astaan ​​xoog leh tusaale ahaan Emirates Airline. Xaaladahaas oo kale, waa inaad ku dhufataa dalabaadka loo shaqeeyeyaasha gudaha UAE iyo yaqaan sida loo iibiyo naftaada. Si aad u dhigto si ka duwan, muddada dheer, shaqo raadinta waa isku mid oo loogu talagalay musharrax kasta oo shaqo ee Dubai City.
Suuqgeyntu waxay leedahay macno badan oo la yaab leh, tusaale ahaan, waad awoodi kartaa U isticmaal moobil mobilo si aad shaqo uga hesho Dubai. Waxaad faahfaahintaada u soo diri kartaa tusaale ahaan Linkedin ama Facebook shaqooyinka. Ama xitaa u dir boostada bogagga loo-shaqeeyaha si aad u hesho shaqo-bixiye toos ah.
Sidee ilaa u istaagaan kartida loo shaqeeyayaasha Dubai
Dhanka kale, haddii aad raadineyso xirfaddaada wanaagsan ee Bariga Dhexe. Waa in aad tixgelin deynta bangiyada Dubai. Caddaymaha ugu adag ee aad u baahan tahay inaad cadeyso waa waayo-aragnimadaada waxbarashada iyo xirfaddaada. Marka la eego qodobbada, qaybta ugu muhiimsan, waayo-aragnimada aadka u wanaagsan waa furaha. Ilaa waqtigan xaadirka ah, khibraddaada khaaska ah waa hanti xoog leh. Si aad shaqo u hesho xirfadaha isgaadhsiinta ee wali, waxay leeyihiin qiimo aan la aqbalin.
Waqti dhow ama goor dambe xirfad-doone kasta wuxuu u baahan yahay inuu hormariyo marka hore meel qiimahooda iyo xirfadahooda loo shaqeeyaha mustaqbalka. Si aad uga bilawdid naftaada suuqa kahor intaadan hogaaminin meheraddaada waxaad ubaahantahay inaad sii dejiso awoodaada. Waxaan nahay ka caawinta Hindida Gacanka Gacanka inay shaqo helaan. Taasi waa xaqiiq, waxaannu jecel nahay inaan helno Resume aad hadda ka timaaddo Hindiya. Sidaas darteed waxaad u istaagi kartaa shaqo-bixiyeyaasha mustaqbalka leh shirkadeena.
Guud ahaan marka la hadlayo, si aad naftaada u kobciso waxaad u baahan tahay inaad si adag u shaqeyso. Shirkadda Dubai City ayaa ku siiyay qodobadan, xaqiiqdii, waxaad ubaahantahay inaad ka shaqeyso xirfadaha qaarkood sida gorgortanka, diblomaasiyadda, la-talin iyo qaylo-sharafeed fiican iibka. Safka hore oo leh shakhsiyad wanaagsan, waxaad ku gaari doontaa bartilmaameedkaaga. Xaqiiqdi, waxaad runtii ku soo jiidataa dareenka loo shaqeeyaha la filaayo. Gaar ahaan haddii aad tahay raadinta shaqo ku jirta UAE shaqaale ahaan. Waxaadna awoodi doontaa inaad soo koobto wajiga waji iyo ogow Your Waqti qiimo leh.
Naftaada ku suuq geli hay'adaha shaqaalaynta
Hoostaada ama wakhti dambe waa inaad bixisaa khibrada ugu fiican Wakaaladaha shaqaalaynta ee sare iyo goobaha shaqada ee Dubai. Waxa ugu horreeya ee la xasuusto si aad u hesho xirmo kaamil ah waxaad u baahan tahay inaad aad ugu fiicnaato suuqgeynta. Sida la ogsoon yahay in waayo-aragnimadaada marwalba la beddeli karo oo kor loo qaadi karo tan iyo markii aad ku dhufatay caasimadda Imaaraadka Carabta Emirates. Marka, ilaa iyo waqtiga xaadirka ah jooji raadinta doorarka hoggaamiyeyaasha sare ee Dubai. Kuwa ku qoran Bariga Dhexe iyo Gacanka ayaa ah kuwa ugu adag ee lagu qancin karo.
Waxay ka duwan yihiin kuwa kale sababtoo ah waxay dhammaantood ka yimaadeen asalka caalamiga ah. Isla mar ahaantaana, ma fududa inay la socdaan waxaad ubaahantahay in lagu hanuuniyo sida loo ogaado.
Waa inaad isticmaashaa WhatsApp si aad u hesho shaqo heer hoose marka hore. Caddaynta ugu badan ee qasbaya hayadaha shaqaalaynta waa resumeygaaga iyo boggaaga xiriirka Linkedin. Muhiimad ahaan resumeygaaga iyo boggaaga xiriirka Linkedin waa midka ugu weyn ee furitaanka aad yeelan karto. Sababtaas awgeed, dirista cv iyo suuqgeyntaada profiles shaqaaleeyaha mustaqbalkas waa fikradda ugu fiican ee aad heli karto.
Dubai Xirfadaha iyo siyaabooyin aad u fiican oo aad ku iibsaneysid gudaha Is-bahaysiga Imaatinka?
Markaad tixraacdo qodobadan, raadso hannaan xad dhaaf ah oo ah sida aad u bilaabi karto suuqa Dubai
Sida iska cad, bilaw in aad falanqayso suuqa bartilmaameedka
Fahmaan qarsoodigaaga suuqa shaqada ama dalbashada shaqo ku jirta shirkadaha qorista gudaha Dubai. Baadhitaanka ugu dambeeya ee dalabkaaga shaqo. Waxaad ubaahantahay inaad sameyso shaqo-guri oo inta ugu macquulsan ah. Guud ahaan kahadalka iyo waxkasta oo lagu tixgeliyo suuqa bartilmaameedka. Tusaale ahaan, waad ku garaaci kartaa banaanbaxyada hotel ee Dubai. Dhinaca kale, aqoonsiga fikradda iyo falsafadda ururka. Ka dib markaad isku daydid inaad ogaatid khibrada, shakhsiyadda, kartida, khibradda, iyo u qalmidda shirkadda ugu qiimaha badan.
Gaar ahaan shaqo dalbashada ayaa ku akhri sharaxaadda shaqada kahor intaanad la hadlin qofka saxda ah. Sidoo kale, waxa ugu horreeya ee la xasuusto waa qeexitaan shaqo iyo shirkad hoos-u-dhigid deg-deg ah, khasab, iyo dalbasho Suuqa suuqa shaqada ee UAE. Guud ahaan marka la isku dayo, iskuday inaad ka shaqeyso sida ku xusan waxa loo baahan yahay in loo qabto doorkaas. Laakiin mustaqbalka fog, ma waxaad noqon doontaa fulin ahaan Tababaraha kooxda. Waxay keeni doonaan wax qabad la yaab leh waxayna la jaan qaadi doonaan kooxda maamulka ugu fiican ee shirkadda.
Waa maxay sababta shakhsiyaadka shakhsi ahaaneed ay muhiim u tahay shaqo raadiyaha
Waqti marba mar waxaad u baahan tahay inaad abuurto xiriiro ujeedo ah inaad shaqo hesho. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo bulsho leh kuwa kale kuwaas oo runtii u baahan kaalmo. Inkasta oo tani ay noqon karto mid la beegsan karo dadka rukunka ah macnaheedu waa shaqo raadinta Dubai. Dhinaca kale suuq-geynta, adiga ayaa ku saabsan tababarka takhasuska ee hore loo qabtay. Tusaale ahaan sida khibradaagu u noqon karto faa'iido u leh shirkad mustaqbalka ee Dubai.
Markaa mar kale isku dhafan xirfado iyo waxbarasho. Xaqiiqda oo la socota waayo-aragnimadii hore iyo danaha shakhsiyeed ee aad isticmaali kartid si aad u hormariso xirfadaada dadka kale. Will si fiican u shaqee raadintaadag. Waa in la xasuusto in mar hore waqti hore shaqaale kasta oo shaqo doon ah lagu sharfay shaqo cusub. Laakiin dhanka dhinaca xun, taasi waa shaqadaada inaad u sheegto shaqo-bixiyeyaasha mustaqbalka inay ka ogaadaan astaantaada gaarka ah. Gaar ahaan haddii aad tahay raadinta shaqooyinka banaan haddii aad ka timid Pakistan iyo raadinta in la dego ee United Arab Emirates.
Xannaano Dubai iyo qaabab cajiib ah oo aad naftaada ugu suuq gayn karto UAE - Way kuu shaqeyn doontaa?
Guud ahaan, goob shaqo oo aad u fiican oo aad ka heli karto shaqooyinka:
LinkedIn - Inta badan kuwa ugu caansan ayaa ugu fiican wanaagsan shaqo raadinta.
Angel.co - Aad u fiicantahay bilawga cusub iyo sahlan si loo helo shaqo caalami ah.
Fursaddayda - Mid ka mid ah goobaha shabakadda ee ugu fiican ee aad u diri karto farriin toos ah.
Sida xaqiiqda ah, waxaad ku tuseysaa wakhti luuqadaada ah
Qodob kale oo muhiim ah shaqo raadintaada Dubai iyo Abu Dhabi waa luqad qaab. Marka loo eego xaaladahaas, tani waa hab lagu sharaxo farqiga wanaagsan. Qorshaha geedi socodka guud ee xirfadahaagu wuxuu noqon karaa mid waxtarka u leh ururo badan. Ma aha in lagu xuso khibrad ganacsi taas oo ah waxaad isticmaali kartaa si aad u hesho shaqo ka fiican.
Waxa ugu horreeya ee la xasuusto waa ereybixinta ereyga aad isticmaaleyso. Iyada oo fiiro gaar ah la siineysa dareenka erayga markii aad wareysiga leedahay. Sida kor lagu muujiyey, fahanto micnaha weedho muhiim ah ee warshadaha. Loo-shaqeeye kasta maxaa yeelay iyagu waa isku mid muhiim markaad codsaneyso door cusub oo Dubai ah. Dhanka kale, luqada cadeyntu waxay kaa caawin kartaa inaad degto a shaqo riyadeed gudaha UAE.
Xannaano Dubai iyo qaabab cajiib ah oo aad naftaada ugu suuq gayn karto UAE it waa habka ugu wanaagsan ee lagu bilaabi karo xirfad cusub.
Sidaa awgeed, khaladaadka naxwaha saxda ah khaladaadka hingaadka
Intaa waxaa dheer in la isticmaalo weedho sax ah qaybaha gaarka ah sida saliidda iyo gaaska ama suuqgeynta. Waxaa laga yaabaa inuu kaa caawiyo xitaa inaad hesho xirfado gaar ah oo tababar ah oo ay bixiso loo shaqeeyahaaga mustaqbalka. Iyadoo maskaxda ku jirta waxay raadin kartaa qaladaadka naxwaha saxda ah, khaladaadka hingaadka ama xitaa xitaa jumlado dhammaystiran markaad leedahay wareysi waji ah. Khaladka ugu xun ee aad yeelan karto waa inaad tagto wareysiga. Ka dibna qofka wax qora ayaa sheegi doona qalad ku jira Resume. Xaaladdan oo kale, kalsoonidaadu waxay ku dhici doontaa wax badan.
Dubai waa meel aad u fiican oo aad ku noolaato oo aad bilowdo shaqo laakiin CV-gaagu wuxuu u baahan yahay inuu fiicnaado. Si kasta oo aad u fiicnaatid waad u suuq geyn doontaa. Haddii si khalad ah loogu qoro tusaale ahaan ma gaari doontid cidna. Waqti kasta oo aad direyso Resume ah. Fadlan hubi in aad ku shaqeyso oo ku samee heer sare.
Dhisida calaamaddaada iyo muujinta a wax yar yari shakhsiyadda
Iyada oo la iftiinayo dhismaha calaamadda shakhsi ahaaneed. Ha ka baqin inaad ku darto xuruufta yar iyo taabasho shakhsiyeed codsigaaga. Intaa waxaa dheer, inkasta oo ay taasi noqon karto mid run ah muddada dheer. Laakiin codsiga xirfadda Waxay kuxirantahay sida aad u suuq gayn karto waxqabadkaaga iyo waxqabadkaaga. Markaad tixraacdo qodobbadaas, waxaa aad muhiim u ah inaad garato waxa kaa duwan oo kaa beddelaya kharashyada kale, tusaale ahaan shaqaalaha Philipino ee Dubai. Sidaa darteed ma xiriiri kartid shaqo-bixiye si shakhsi ahaan ah.
Hadafkani waxaa ka mid ah danahaaga, dabacsanaanta, xiisaha, ixtiraamka ee mashruuca shirkadda Dubai Dubai. Si aan u dhihinno xirfad shakhsiyadeed oo shakhsi ah ayaa noqon doona qayb ka mid ah xirmo fiican. Sidaas awgeed, ha maskaxin maskaxdaada. Taasina waa suuq-geynta aad naftaada u leedahay shaqaaleynta ee 2018.
U samee calaamadaada gaarka ah ee Dubai Career ee UAE
Falanqaynta kama dambaysta ah, Shirkadda Dubai City waxay aqoonsan tahay sida ugu sahlan ugula tartamidaada bogga Dubai. Labadaba, qaadashada horumarinta xirfadaha ee UAE. Sooner ama wakhti dambe xitaa hore si loogu shaqeeyo Sacuudi Carabiya. Taariiqdaada shakhsi ahaaneed waxay noqotaa mid aad u muuqata oo dhan oo ka mida warshadaha Ilaa waqtigan xaadirka ah, ugu dambeyntiina, waxaad dhisi doontaa aqoon u gaar ah oo ku saabsan shirkadda Dubai.
Iyadoo la tixraacayo qodobbadaas si joogto ah macluumaadka u khuseeya iyo jago wanaagsan wuxuu kaa dhigayaa cilmi baaris shaqo fiican. Iyadoo ujeedkani yahay in la xoqo warshadaha dusha sare. Sababtaas awgeed baaritaan lagu sameeynayo wargalin, shaqooyin ku yaalla blogyada Dubai iyo goobaha shaqada ee magaalada Dubai. Qodob kale oo muhiim ah oo aad qaadi kartid ayaa ka jawaabaya oo wax ku biirinaya calaamad doodda Dubai. Hadaad rajeyneyso in ay diyaar u tahay oo kuu soo gudbineyso meesha wareysiga marxaladda. Sidaa daraadeed si kale u dhigno sida aan kugula talineyno sida aad si guul leh ugu iibin lahayd Imaaraadka Imaaraadka Carabta.
Xannaano Dubai iyo qaabab yaab leh oo aad naftaada ugu suuq gayn karto UAE - Isku day inaad marwalba dhisto adahaaga gaarka ah ee Dubai.
Naftaada si guul leh ku suuq geli goobaha shabakadaha bulshada
Si la mid ah muhiim iyo sida ugu wanaagsan ee aad naftaada ugu suuq gayn karto waa warbaahinta bulshada. Ilaa iyo hada, shabakadaha shabakadaha ayaa ah kuwa ugu horreeya ee beddelaya cayaaraha. Guud ahaan marka laga hadlayo, way ka fududaadeen sidii caadiga ahayd naftaada isku dhafka ah ee ku shaqeeya Emirates ee ku yaala UAE. Xiriirka bulshadu wuxuu kaa caawinayaa inaad samayso xiriiro iyo horumar xirfaddaada. Waqti ka waqti goobaha sida LinkedIn, Angel.co, iyo Bayt.com waxay kaa caawineysaa inaad gaarto loo shaqeeyayaasha tooska ah ee Bariga Dhexe.
Inta badan, habka la heli karo ee isdhexgalka waxay kaa caawineysaa inaad maareyso xirfaddaada. Sida la ogsoon yahay in ilaa iyo hadda la helo shaqo ka hesho Dubai iyada oo loo marayo shabakadaha shabakadaha ayaa kaa caawinaya in aad u fududeyso fursadaha shaqo ee cusub. Xaqiiq ahaan, illaa intaad adigu soo iibinta resume waayo, Shaqooyinka Dubai shaqooyinka bannaan ee shirkadeena. Isbarbar dhig ahaan, kordhinta raadintaada shaqada ama shaqaaleysiinta suurtagalnimada iyo shahaadada.
Mid ka mid ah kuwa ugu guulaystay Musharixiinta loogu talagalay xirfadlayaasha Dubai waa Koonfurta Afrika. Kuwa kale waxay haystaan ​​waxbarasho fiican. Intaa waxaa dheer khibrad aad uwanaagsan oo laga helo shirkado waaweyn oo horeba ku salaysan Bariga Dhexe iyo Koonfur Afrika.
Xannaano Dubai iyo qaabab cajiib ah oo aad naftaada ugu suuq gayn karto UAE - Adiga miyaa adiga?
Suuq-geynta shirkadda Dubai ee Career iyo WhatsApp
Sida xaqiiqda ah, haddii aad raadineyso shaqo. Waa inaad tixgelisaa noo Kooxda WhatsApp ee lagu horumarinayo CV-gaaga Dubai. Iyadoo la tixgelinayo qodobadaas, kooxdayada maamulka ayaa abuuray kooxo dhowr ah si ay uga caawiyaan dadka kale inay qoraan qorayaasha Dubai. Waa inaad tixgelisaa dib u noqoshadaada si aad u hesho shaqo fiican. Tani waa mid aad u muhiim ah haddii aad ku saabsan tahay inaad ku suuq-gasho suuqaaga oo aan ahayn kaliya Dubai, laakiin Bariga Dhexe sidoo kale.
Shirkadda Magaalada Dubai ee maamusha xisaabaadka bulshada ee Bariga Dhexe Kooxda WhatsApp ujeeddada laga caawinayo kuwa kale. Kooxa WhatsApp-ka ah waa lacag la aan waana had iyo jeer sidan. Sababtoo ah shaqo raadiye kasta waa inuu lahaadaa fursad uu kula xiriiro shaqaale qorayaasha ka badan telefoonka gacanta. Caddaalad kuma filnaan doonto haddii murashax cusub oo raadinaya jagada uusan awoodi karin. Faahfaahintayada iyo talooyinkayaga, sidoo kale waa inaad fiirisaa shirkadaha shaqaalaynta.
Waxaad leedahay a Mashiinka raadinta shaqada ee Careerjet International iyo Gulf recruitment website. Waxay dhammaantood diyaar u yihiin inay qaataan CV-gaaga. Iyo hubaal xaqiiqdii runtii aad u qalantid inaad dalbato arjiga shaqada.
Shaqooyinka bannaan ee shaqada iyo suuqgeynta
Waayo, helitaanka shaqo caalami ah iyo shaqooyinka banaan ee banaan. Waqti qaadashada iyo suuqgeyntu maaha wax muhiim ah. Waxaad u baahan tahay inaad isku xirto iyo khibrad gacanta ah. Dhammaanba, dhab ahaantii, waxaad u baahan tahay inaad haysato shahaadooyin wanaagsan oo ku yaal UAE. Tusaale ahaan, waayo-aragnimada aad ka timid waddanka hooyo maaha ku filan in la dhigo Dubai. Xaaladaha qaarkood waxaad u baahan doontaa inaad raadiso shaqooyinka bilowga ah ee UAE.
Si aad u bilawdo xirfadda Gacanka waa muhiim jeegaree xeeladaha iibka iyo suuqgeynta hage. Inta badan howl wadeenada waxay baaritaan ku sameeyaan xirfadahooda gudaha. Laakiin ka dib oo dhan habka ugu caqliga badan waa in shaqo laga raadsado adduunka oo dhan dhinacyada suuq geynta. MiddleEast waxaa ka buuxa xulashooyinka murashax kasta oo cusub. Gaar ahaan Indian iyo Pakistani shaqaalaha. Laakiin haddii aad horay u booqatay Dubai waa inaad taas ogaataa.
Waxaa jira shaqooyin badan oo fudud, tusaale ahaan, boosaska faransiiska ee dalalka Khaliijka sida Qadar ama Kuwait. Noocan ah Xirfadlaha waa ku fiican yahay UAE.
Talo-bixinta xirfadeed ee Dubai
Iyadoo la tixgelinayo qodobbadaas nuxur ahaanta ku saabsan suuqa. Si aad u muujiso waxaad u baahan tahay inaad si fudud u bilawdo u dirista resumeyaal goobaha shaqada ee dalka Imaaraadka. Iyo dhinaca dhinaca xun, weli habka ugu wanaagsan ee aad u iibsan karto naftaada waa wicitaan qabow ee shaqooyinka banaan. Waa wax ku saabsan isagoo haysta xirfad shaqo oo cajiib ah kuna soo bandhigaya suuqa shaqada ee Dubai.
Sidaa darteed habka suuq-geynta suuqgeyntu waxay noqonaysaa mid fiican sida geeddi-socodka. Sidaa darteed, xaaladahaas oo kale, qaado waqtiga si aad u marto. Xirfad-kala-duwanaansho, sirdoon iyo nidaam urur-yaqaano ah oo shaqaaleyn doona mustaqbalka ku shaqaaleysiin boos bannaan oo ku yaal Dubai. Meelaha badanaa la iska indha-tiraa waa la-taliyayaal takhasus ah oo aad isticmaali kartid shirkadeena oo aad wax ka qabatid marka hore.
Mid ka mid ah siyaabaha caqliga leh waa shaqo ka helitaanka lahaanshaha waxbarashada MBA. Taasi waxay kaa caawin kartaa wax badan oo ku saabsan Dubaydhiga Dubai iyo qaabab cajiib ah oo aad naftaada ugu suuq gayn karto UAE.
Xannaano Dubai iyo qaabab yaab leh oo aad naftaada ugu suuq gayn karto Imaaraadka
Adiga laftaada, talo-bixin shaqo raadin, iyo siyaabo lagu horumariyo Bariga Dhexe.